Andriamifidisoa Zo · Septambra 2008 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Septambra, 2008
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Septambra, 2008
Shina: Handratra ny fontsika ve ny loka Nobel ho amin'ny fandriampahalemana?
Shina 28 Septambra 2008
Efa tsy dia tena faraidiny loatra ny tantana raha nahazo ny loka Nobel momba ny haisoratra i Gao Xingjian tamin'ny 2000; Niarahaba ilay nizaka ny zom-pirenena Shinoa teo aloha i Zhu Rongji, ary notazonin'i Wikipedia fa fotoana mahafinaritra ho an'ny haisoratra Shinoa ny nandrombahany azy tamin'ny faha-100 taonan'ny Loka Nobel,...
Ejipta: Jiolahin-tserasera manao Jihad (na sovoka anaovana jihad)
Ejipta 27 Septambra 2008
Mihanaka avy eny an-tokontany hiditra amin'ny tontolo viritoaly ve ny Jihad ? Soratan'ny mpamaham-bolongana Ejipsiana Marwa Rakha eto (sy eto) ny fahatongavan'ny adihevitra mandeha eo amin'ny vondrona lahika sy Isilamika ao Ejipta amin'izao fotoana izao. Manoratra ary izy: It is no big secret that the number of Egyptians who believe...
Pakistana: “Fa maninona Rakoto no tsy raharahan'ny Google izahay?”
Pakistana 26 Septambra 2008
Ampiasain'ny Karana ho sehatra itarainana ny bolongana rehefa niresaka manodidina ny fitongilanan'ny haitaon'ilay goavana Google ry zareo. Ny miteraka adihevitra eto dia ny Google Doodles (soritsoritra google) ho an'i Pakistan. Google Doodles moa no anaran'ireny kisarisary asehon'i Google tsindraindray rehefa amin'ny fotoan-dehibe ireny. Mankalaza sy manome voninahitra ny ankamaroan'ireny fety...
Herinandron'ny moana marenina: Mangetaheta fanabeazana mamirapiratra
Amerika Latina 24 Septambra 2008
Amin'ny fizarana faharoa amin'ity lahatsoratra mikasika ny herinandron'ny moana marenina ity (eto ny fizarana voalohany), dia entinay any amin'ny tontolon'ny fanabeazana ny moana marenina ianareo, sy ny fanamby isan-karazany tsy maintsy atrehiny. Voalohany ny any amin'ny Repobilika afovoan'ny Afrika misy sekoly iray misokatra noho ny fitiavana madiodio rehefa nitsahatra ny...
Ekoatera: Ny fiarovana ny valalabemandry
Amerika Latina 23 Septambra 2008
Ny fahasarotam-piaianana any Ekoatera no iray amin'ny lazaina ho anton'ny fiakaran'ny halatra sy ny vono olona ao amin'ny firenena. Ny ankamaroan'izany fandikan-dalàna izany moa diaataon'ireo tsy an'asa izay tsy maintsy mitady ny fomba hahazoany hanina mba sitrany ahay velona aloha ka ny fomba ataony dia ny mangalatra na ny mamono olona. Sarotra ho an'ny olo-tsotra ihany ny hiaina anaty tsy fandriampahalemana ka mamoaka ny eritreriny ihany koa ny mpamaham-bolongana.
Herinandron'ny fampahalalana ny moana marenina: fomba hafa hampitan-kafatra
Amerika Avaratra 23 Septambra 2008
Moa fantatrao fa maro amin'ny moana izay mampita hevitra amin'ny alalan'ny fipeliky ny tanana, no mihevitra io fipeliky ny tanana io ho fiteniny voalohany ary ny teny voasoratra kosa ho fiteniny faharoa? Tsy nahalala aho manko fa soa ihany fa nahita ireo lahatsary ampolony nasehon'ny avy ao amin'ny fikambanan'ny moana...
Singapaora: Voarara ny ronono shinoa
Shina 21 Septambra 2008
Nahitana melamina , ilay fangaro namparary sy nahafaty zaza tany Shina, ihany koa ilay marika ronono holandey any Singapaora. Voarara any Singapaora moa ankehitriny ny ronono avy any Shina. Nosoratan'ny mpamaham-bolongana iray : “Ho porofon'ny fifandraisan'izao tontolo izao sy ny fiafaran'ny sakafo amin'izao fotoana izao, dia efa niitatra tafavoaka an'i Shina...
Bengladesh: Nananga-jaza tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ve McCain?
Amerika Avaratra 21 Septambra 2008
Shada Kalo bolongana no manontany sao dia tsy ara-dalàna ny fananganan-jaza nataon'ilay mirotsaka hofidiana ho filohan'i Etazonia i John McCain sy i Cindy McCain tamin'ny zanany vavy bangla antsoiny hoe Bridget satriamanko araka ny lalàna bangla dia ‘tsy misy vahiny mahazo manangana zaza bangla ho zanany’.
Japana: Namoaka DVD ilay mpanao politika Yuri Fujikawa
Japana 21 Septambra 2008
Ny hivoahan'ny [ja] DVD mampivoitra ilay mpanao politika japoney 27 taona Japanese Yuri Fujikawa [藤川 優里], mpikambana ao amin'ny antenimieran'ny tanànan'i Hachinohe [八戸市] ao amin'ny Pirefekitioran'i Aomori [青森県], izao no ambentin-dresaky ny dinika (forum) rehetra [ja]. Raha hitamberina ny nidirany tamin'ny asany voalohany tamin'ny fiandohan'ity taona ity, dia nantsoina hoe...
Japana: ny bika tsy mahasalaman'ny “Oliravina”
Mpamaham-bolongana Japoney Miyakichi ao amin'ny Miyakichi Nikki no mamelabelatra hoe nahoana moa no tsy mahasoa (tsy mifanaraka amin'ny fahasalamana velively) ny bika asehon'ireo mpilatro mahafatifaty manerantany amin'izao fotoana izao ireo [ja], izay mametraka ny safidy ho an'ireo hatsatra tarehy, 40cm ny (manodidina ny) valahiny ary ny fanaovana kiraro avo voditongotra...